Vita ny fanarenana ny tranon’ny CNEMD: nahavita fiofanana ambony ireo mpampianatra mozika | NewsMada
Tsy mitovy ny nandalo sekoly fianarana mozika sy ny manao mozika fotsiny… Noporofoin’ireo mpianatra sy mpampianatra ao amin’ny CNEMD izany, nandritra ny lanonana roa sosona, omaly.
CNEM, Ivontoeram-pirenena mampianatra mozika taloha, izay niampy ny dihy ka lasa CNEMD, ankehitriny. Mahalala azy avokoa ireo liana tamin’ny fianarana mozika rehetra. Saika nandalo nandranto fianarana tao ihany koa ireo andrarezina amin’ny mozika… Saingy nampalahelo fa simba tsikelikely ilay tranon’ny CNEMD ao ambadiky ny Tranombokim-pirenena ka tsy nampiasaina intsony, ny taona 2019.
« Raha nandray ny fitantanana ny minisitera aho, ny taona 2019, naniry ny hitsidika ny ato amin’ny CNEMD. Nambara tamiko tamin’izany anefa fa tsy azo idirana intsony ity trano fianarana mozika manana ny lazany ity, noho ny fahasimbany. Tsy nisy nanamboatra nandritra ny taona maro kanefa dia toeram-piasana sy fandraisana olona izy ity. Nanapa-kevitra avy hatrany ny minisitera hiroso amin’ny asa fanarenana, noho ny fahatsapana ny maha zava-dehibe ity toeram-pianarana zavakanto ity. Vita izao ny asa ary tsy ny trano ihany no nasiam-panavaozana fa ny fomba fampitana fahalalana ato ihany koa ho mendrika izany hoe CNEMD izany”, hoy ny nambaran’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Andriatongarivo Lalatiana, omaly.
Notokanana omaly, araka izany, ny trano nasiam-panamboaran’ny CNEMD. Niara-dalana tamin’izany ny fanolorana mari-pahaizana ireo mpampianatra sady mpikaroka miisa 13. “Mpampianatra manan-talenta avokoa izy ireo, izay mbola naniry ny hanatevina fahalalana. Nahavita soa aman-tsara ny fiofanana izy ireo ka mendrika ny homena ny mari-pahaizana ambony mifanaraka amin’ny lentany”, hoy kosa ny nambaran-dRazafindrazaka Holy, talen’ny CNEMD.
Misongadina ry Zazakanto
Nanapa-kevitra ny minisitera sy ireo teknisianina amin’ny sehatry ny mozika, hitondra fanazaovana amin’ny fampianarana mba hifanaraka amin’ny maha izy azy antsika sy ny iainan’ny Malagasy. Anisan’ireo mpianatra, tamin’iny taom-pianarana iny, noraisin’ny CNEMD sy nisitraka izany fanavaozana izany ry zalahy Zazakanto. Vao volana vitsy monja, kanefa efa nahafolaka zavamaneno sahady izy ireo, hany ka tafatsangana ireo mpanotrona rehetra taorian’ny seho fohy nataon’ireto manan-talenta ireto.
Nisy 103 ireo mpianatra nandritra iny taom-pianarana iny ka ny 69 tamin’ireo no afaka tamin’ny fanadinana. Tsy tena sakana loatra tamin’ny fampianarana ny fihibohana, satria ampy ihany ny fotoana namitana ny fandaharam-pianarana, raha ny fanazavana.
Fantatra fa hatao tanjona manaraka ny fanokafana ireo rantsan’ny CNEMD any amin’ny faritra. Eo koa ny fampiarahana ny asa, izay iandraiketan’ity ivontoeram-pampianarana mozika sy dihy ity, amin’ny Akademiam-pirenen’ny zavakanto sy ny kolontsaina, izay ho vita ny volana janoary 2021.